Amarkannaguna ma aha mid mooyeen sida Ilbidhiqsi.
Dhab ahaan baan u halaagnay kuwa idin la mid ah, ee wax waantoobi ma jiraa.
Wax kastoo dadku falo wuxuu ku suganyahay Kutubta.
Kuwa dhawrsadana waxay gali Jannooyin iyo wabiyaal.
Meel la fadhiisto oo xaq ah oo Eebaha awoodda leh agtiisa ah (yaa u sugnaatay).
(Eebaha) Raxmaan ah.
Dadkana wuu abuuray.
Wuxuuna baray dadka (Hadalka).
Qorraxda iyo dayaxuna waxay ku socdaan xisaab.
Xiddigga iyo Geedkuba way Sujuudaan (Eebe Dartiis).
Samadana Eebaa koryeelay, Garsoorna wuu dajiyay.
Si aydaan uga gudbin Caddaaladda.
Miisaanka ku hagaajiya Caddaalad, hana nuqaamininna.
Dhulkana Eebe wuxuu u dajiyay khalqiga.
Dhexdiisa waxaa ah Faakihad (khudaar) iyo Timir Fiido leh.
Xubuubna (midho) ball leh iyo udgoona wuu abuuray.
Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan (Insi iyo Jinniyow).
Dadka Eebaa ka abuuray dhoobo Jilay oo kale ah.
Ilaaheen waa Eebaha Labada Qorrax ka soo bax iyo Labada Qorrax u dhac.